प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम उत्पादन ! – HamroKatha
प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम उत्पादन !
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) मा रहेको पाइरोलाइसिस प्लान्ट बारे बुझौं
हाम्रो कथा २०७६ वैशाख २२ गते १७:३५
के तपाईलाई थाहा छ ? – नेपालमा दिनहुँ ४१५ टन प्लाष्टिकजन्य फोहर उत्पादन हुन्छ । काठमाण्डु उपत्यकामा मात्र ७५ टन यस्ता फोहर उत्पादन हुन्छन् । तर यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । यदी प्लाष्टिकजन्य यि फोहरलाई सहि सदुपयोग गर्ने हो भने यो समस्या हैन अवसर बन्नेछ । तर कसरी ? यो बुझ्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) परिसरमा रहेको पाइरोलाइसिस प्लान्ट बारेको उपयोगिताबारे बुझ्नु पर्छ ।
प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम निकाल्न प्रयोग गरिने मेसिनलाई पाइरोलाइसिस मेसिन भनिन्छ । तीन बर्ष अघि जापान सरकारले नाष्टलाई अनुदानस्वरुप यस्तो मेसिन उपलब्ध गराएको छ । यसले फोहरका रुपमा रहेको प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम निकाल्ने काम गर्छ ।
हामीले दिनहुँ प्रयोग गर्नेगरेको प्लाष्टिक झोला तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थबाटै बनेको हुन्छ । जुन विधिबाट प्लाष्टिक बन्यो त्यसकै विपरित बिधिबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने काम यो मेसिनले गर्छ । नाष्टले गरेको एक अनुसन्धानका अनुसार एक किलो प्लाष्टिकबाट औसतमा सात सय मिलिलिटर पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुन्छ ।
पाइरोलाइसिस मेसिनले अक्सिजन नभएपनि प्लाष्टिक पगाल्छ । यो मेसिनको रियाक्टरमा प्लाष्टिकलाई करिब ४५० सेन्टिग्रेडसम्म तताईन्छ । प्लाष्टिक पग्लन थालेपछि बाफको रुपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई पानीको सम्पर्क गराईन्छ । पानीभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ हलुंगो हुनेभएका कारण यो पानीमा तैरिन्छ । दुई देखि तीन घण्टामा पानी र पेट्रोलियमको छुट्टै तह बन्छ । यहिबाट पानी र पेट्रोलियम छुट्टाईन्छ ।
नेपालमा प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम सम्भव छ भनेर परिक्षणका लागि नाष्टले यो प्लान्ट स्थापना गरेको हो । ठुलो परिमाणमा पेट्रोलियम उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्ने हो भने आर्थिक हिसाबले पनि सम्भव रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
नाष्टका अनुसार हामीकहाँ दिनहुँ निस्कने प्लाष्टिकजन्य फोहरमध्ये ५४ प्रतिशत फोहरबाट पेट्रोलियम निकाल्न सकिन्छ । नाष्टले एउटा अनुसन्धाननैं गरेको छ उपत्यका सहितका हाम्रा ठुला शहरमा कति पेट्रोलियम उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर । सबैभन्दा बढी पेट्रोलियमको उत्पादन काठमाण्डुमा गर्न सकिन्छ । यहाँ बार्षिक १८ हजार १२९ किलोलिटर पेट्रोलियम उत्पादन हुन्छ ।
यसैगरि ललितपुरमा ४ हजार ८६० र भक्तपुरमा ३ हजार १५८ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुन्छ । उपत्यका बाहिरका अरु ठुला शहरहरु विराटनगरमा २ हजार २३५, वीरगञ्ज २ हजार १६५, हेटौंडा १ हजार ५९१, भरतपुर २ हजार ८०, पोखरा ४ हजार ३०४, नेपालगञ्ज १ हजार ४४६, धनगढी,भीमदत्त,गोदावरीबाट ४ हजार २ सय ११ किलोलिटर पेट्रोलियम उत्पादन हुने नाष्टको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
प्लाष्टिक आँफैमा हानिकारक हैन । तर यसलाई कसरि व्यबस्थापन गरियो भन्ने बिषय मुख्य हो । प्लाष्टिक हजार बर्षसम्म पनि प्लाष्टिककै रुपमा रहन्छ । हावा, पानी र घामले गर्दा लामो समयपछि सानो–सानो टुक्रा बनेर वातावरणमा मिसिन्छ । तर यो कुहिंदैन । यसलाई खुला हावामा पोल्ने हो भने क्यान्सर गराउन सक्ने हावा उत्पादन हुन्छ । त्यसैले यसको व्यबस्थापन वैज्ञानिक ढंगबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।